Abiy oo ku Baaqay ‘Naf-huris’ lagu Badbaadinayo Ethiopia | Dayniile.com
Home Warkii Abiy oo ku Baaqay ‘Naf-huris’ lagu Badbaadinayo Ethiopia
Ra’iisulwasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa Sabtida maanta ah sheegay in Ethiopia ay sameyso “naf-huris” lagu “badbaadinayo” dalka, iyadoo hadalkiisu imanayo xilli uu dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda kuwa fallaagada Tigray uu sii xoogeysanayo, halisna ku hayo caasimadda.
Hadalkan ayaa yimid maalin ka dib markii sagaal kooxood oo fallaago ah ay sheegeen in ay ku biirayaan oo ay isbahaysi la sameysanayaan Jabhadda Xoreynta Shacabka Tigray (TPLF) oo muddo sannad ah dagaal kula jirtay xukuumadda Abiy.
Wakiilka TPLF Berhane Gebre-Christos ayaa Jimcihii mar uu magaalada Washington ku saxiixayay heshiiska sagaalka xisbi ee isbahaysigan ku midoobay waxa uu sheegay in isbahaysiga ujeedkiisu yahay “in meesha laga saaro taliska.”
“Waa in la sameeyaa naf-hurid, taasi oo badbaadin doonta Ethiopia,” ayuu Abiy ku qoray bartiisa Twitter-ka.
“Waxa aan wajahnay imtixaanno iyo caqabado kuwaasi oo innaga dhigay kuwii sii xoogeystay. Waxa aan leennahay xulufo ka badan kuwa ay haystaan dadka naga soo horjeestay,” ayuu yiri.
Previous articleMusharax Madaxweyne ahna Ra’iisal Wasaarihii hore ee dalka Mudane Xasan Cali Khayre muxuu uga duwan yahay madaxda kale ee u taagan tartanka xilka Madaxtinimada dalka?
Next articleSierra Leone: Tiro dad ah oo ku dhintay qarax ka dhashay booyad shidaal
Shaqaalaha gargaarka ee ku sugan Libiya oo sheegay muhaajiriinta xabsiyada dalkaasi...
Cabdullahi Keynaan “200 neef oo lo’ ah ayaa iga dhimatay muddo...